Dhimashada xad dhaafka ah ee daroogada ayaa gaartay heer cusub: 100,000 sanadkii hore gudaha Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Dhimashada xad dhaafka ah ee daroogada ayaa gaartay heer cusub: 100,000 sanadkii hore gudaha Mareykanka
Marka loo eego xog cusub oo ay soo saartay Xarunta Xakamaynta Cudurrada, dhimashada xad dhaafka ah ee daroogada ee Maraykanka ayaa kor u dhaaftay 100,000 muddo 12 bilood ah markii ugu horeysay. Tirada dhimashada xad dhaafka ah ayaa kor u kacday 29% sanadkii la soo dhaafay. Xogta waxaa loo arkaa mid ku meel gaar ah laakiin waa saadaaliye waxa tirooyinka ugu dambeeya ay muujin doonaan.
Khubaradu waxay u maleynayaan in masiibadani ay qayb ka qaadatay kororka isticmaalka daroogada iyo dhimashada, laakiin ilaa maanta, ma jirto caddayn adag. Waxa ay khubaradu sheegaan, si kastaba ha ahaatee, waa in waxbarashada hore iyo ka-hortagga ay fure u yihiin beddelka isbeddelka.
Candor, oo siisa waxbarashada caafimaadka maandooriyaha iyo galmada ardayda fasallada 4 ilaa 8, waxay kordhisay nuxurka waxbarashada daroogada ee carruurta iyo waalidiinta labadaba. Manhajkeeda 'Sayniska ka dambeeya daroogada' ayaa si joogto ah u kobcaya si wax looga qabto isbeddellada isticmaalka daroogada iyo xadgudubka. Candor wuxuu aaminsan yahay in ka-qaybgalka waalidiinta kala xaajoodka carruurtooda ee ku saabsan daroogada iyo caafimaadka galmada ay horseeddo doorashooyin caafimaad leh.
Talooyin loogu talagalay waalidiinta
• Noqo qof la soo dhawaan karo oo bilow wada hadal - Ka hadalka baabuurka wuxuu noqon karaa meel aad u raaxo badan in laga hadlo - oo ka hadalka hal mar kuma filna.
Isticmaal sheekooyinka wararka si aad u bilowdo wada hadal - Marka wax la xidhiidha isticmaalka maandooriyaha ee xad-dhaafka ah ay ku jiraan warka, isticmaal si aad u bilowdo wada hadalka.
La wadaag qiyamkaaga iyo waxa laga filayo - Sababta #1 ay carruurtu u sheegaan in aanay isticmaalin khamriga iyo daroogooyinka kale waa sababta oo ah waalidkood way niyad jabi doonaan.
• Samee xeerar cad - Dejinta xeerar cad, oo gaar ah ayaa aasaas u ah dadaalka waalidka ee ka hortagga. La samee sharciyada ilmahaaga oo si joogto ah u dhaqan.
La soco daawooyinka - Waa muhiim in si habboon loo tuuro daawooyinka waqti ku habboon.
• Dhis xidhiidhka waalidka/carruurta – Wada cun cunno marka aad awooddo kana saar qalabka elegtarooniga ah ee cuntada, qolalka jiifka, iyo hawlaha qoyska. Ka fiirso danaha ilmahaaga.
Baro asxaabtooda - U fiirso kuwa ilmahaagu la socdo oo ka faa'iidayso inaad is barato waalidkood. Noqo jidkii ay ka bixi lahaayeen.
• U sheeg ilmahaaga inay ku soo wici karaan wakhti kasta si ay u helaan ama marka ay ku jiraan xaalad cadaadis asaaga ah. Mar walba marmarsiiyo ayay kuu isticmaali karaan.